တိရိစ္ဆာန်ဥပဒေများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို | USAHello | USAHello
အမေရိကန်တွေတိရစ္ဆာန်များအဘို့ကိုတော၌ထိနျးသိမျးနှင့်တိရစ္ဆာန်ရုံတည်ဆောက်ရန်ငွေအများကြီးသုံးဖြုန်း. သူတို့ရဲ့လယ်ယာမြေနှင့် Ranch အစားအစာထုတ်လုပ်ရန်တိရိစ္ဆာန်များမြှင့်. လူအမြားအမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစဉ်းစား, များသောအားဖြင့်ကြောင်နှင့်ခွေး, ၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်. သို့သော်, အချို့သောမွေးမြူရေးနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်သင်သည်ဒဏ်ငွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လိုကျနာဖို့လိုတယ်သို့မဟုတ်သင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်သင်တို့ထံကယူသှားတဲ့.
Matt Stenovec ဓာတ်ပုံယဉျကြေး
ဤတွင် USA တွင်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူလိုက်လျှောက်ရန်အချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်.
အတော်များများကတိုက်ခန်းမန်နေဂျာသို့မဟုတ်အိမ်ရှင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များခွင့်မပြုပါဘူး. သူတို့ပြုလျှင်, သူတို့သည်သင့်ကိုလိုက်နာရမည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိစေခြင်းငှါဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်တိရိစ္ဆာန်များ့တားရန်ကြီးမားသောလုံခြုံရေးသိုက်သို့မဟုတ်အပိုငှားကောက်ခံသွားမည်. မဆိုကြင်နာတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရတဲ့ခင်မှာ, သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်နှင့်စစ်ဆေး. တချို့ကကြောင်တစ်ကောင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်မခွေး, အခြားသူများကသေးငယ်တဲ့ခွေးကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. တချို့ကတစ်ဦး caged ငှက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦးဖြူကောင်, ကိုရွှေငါးတစ်တိုင်ကီ, တစ်ဦးပုရွက်ဆိတ်လယ်ယာ, သို့မဟုတ်ပင်မြက်မြွေ, ဒါပေမယ့်မခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်. မဆိုကြင်နာ၏အဆိပ်အပြင်းသို့မဟုတ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တိရိစ္ဆာန်များလက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်. စောင့်ရှောက်ခြင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအပေါ်တစ်ဦးအိမ်ရှင်ကရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်သင့်ရဲ့စာချုပ်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့်သင့်အိမ်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျတိရစ်ဆာနျမြား၏ကုမ္ပဏီပျော်မွေ့ခဲ့လျှင်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အိမ်မှာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်, တိရစ္ဆာန်အမိုးအကာများအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား တိရစ္ဆာန် Walker အဖြစ်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်, သင်တန်းဆရာသို့မဟုတ်အလှပြင်ဆိုင်.
တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးအများအပြားဒေသမူများအတွက်ကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်ခွင့်မပြုမီသင်၏ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရနှင့်အတူစစ်ဆေးကလေးငယ်များ; အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရောင်းလည်းအချို့ဒေသများရှိစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စျေးဆိုင်အကြောင်းပိုမိုရှိပါတယ်, အမိုးအကာအောက်တွင်သည်များ.
USA တွင်အချို့လူများကသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့တိရိစ္ဆာန်များရှိ, အပါအဝင်:
ယုန်နဲ့တူနှစ်သိမ့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, ငှက်များ, ကြောင်, နှင့်ခွေးစိုးရိမ်စိတ်တိုက်ဖျက်ဖို့
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်လက်ပတ်နာရီကိုခွေး (ပင်ဝက်) သည်အခြားအန္တရာယ်များကိုဆန့်ကျင်စောငျ့ရှောကျဖို့
ဆေးရုံများအတွက်ခွေးကြည့်ဖို့အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်, ဆရာဝန်တွေ’ ရုံးခန်းများ, သူနာပြုရုံ, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, လေဆိပ်နှင့်ပန်းခြံများ. အများစုမှာအတော်လေးနူးညံ့သိမ်မွေ့များမှာ, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးကိုင်တွယ်သူထံမှခွင့်ပြုချက်ရတဲ့မပါဘဲတစ်ဦးခွေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဘယ်တော့မှ.
ဆရာဝန်တစ်ဦးသည်သင်တို့အတွက်တစ်ဦးကုထုံးသို့မဟုတ်အကူအညီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သတ်မှတ်ထားသောပြီဆိုရင်, သငျတို့သကြောင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြ, အိမ်ရှင်ကများသောအားဖြင့်ကလကျခံဖို့ရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့်သင်ကတိရစ္ဆာန်အသက်သေအရာရှိတဦးကစာရွက်စာတမ်းအရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှိရမည်, ထိုသို့အခြားမည်သူမဆိုတစ်ဦးခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ဘယ်တော့မှရမယ်.
ရဲနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များမကြာခဏပျောက်ဆုံးကလူကိုရှာခွေးနဲ့မြင်းကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်အန္တရာယ်အခြေအနေများထိန်းချုပ်ဖို့. သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးခွေးသို့မဟုတ်မြင်းအတူလုပ်ကိုင်မြင်သောအခါ, မည်သည့်အမိန့်ကိုနာခံရကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းမများတွင်ကြားဖြတ်သို့မဟုတ်မရရန်အကောင်းဆုံးက.
အများစုမှာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကျန်းမာတိရိစ္ဆာန်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိ. သူတို့ကခွေးနှင့်ကြောင်နဲ့တူအဖော်တိရိစ္ဆာန်များခွေးရူးပြန်ရောဂါများအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်လိုင်စင်စေမေးဖို့, ဒါကြောင့်သူတို့ကရောဂါ-အခမဲ့ယူဆနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည် running တွေ့ရှိခဲ့လျှင်ပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်. တချို့ကမြို့ကြီးများသင်းကွပ်ခံရဖို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမလိုအပ်, သို့မဟုတ် “သတ်မှတ်ထားတဲ့,” ဒါကြောင့်သူတို့မျိုးပွားလို့မရဘူး. အကြီးစားဒဏ်ငွေတရားစွဲဆိုနိုင်ပါသည်နှင့်ဤလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်တိရိစ္ဆာန်များကွာသည်သင်တို့ထံကသိမ်းယူ.
ပညတ္တိကျမ်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအပူထဲကနေအမိုးအကာရှိရမည်ပြောပါတယ်, အအေး, မိုးရွာရွာနှင့်ဆီးနှင်း. အသေးစိတျအဘို့သင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ရေးရုံးနှင့်အတူ Check. သငျသညျသတိပြုမိပါလျှင်သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပျောက်ဆုံးနေ, အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းစစ်ဆေး, ရဲတပ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်မှုကိုပဌနာ, သတိပေးချက်များထထား, နှင့်မော်နီတာ “တွေ့ရှိရအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်” ဝက်ဘ်ဆိုက်များ.
သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲကကောက်ယူလျှင်, သငျသညျမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးလက်မှတ်များထုတ်လုပ်ကြောင့်ဥစ္စာသက်သေပြရပါလိမ့်မယ်, သငျတို့သတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဒဏ်ငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ, အဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံအဖြစ်တာ $100, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုပြန်ရရှိရန်. သင်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တောင်းဆိုဘူးဆိုရငျ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အသေသတ်စေခြင်းငှါ (euthanized, “နှိမ့်ချထား” သို့မဟုတ် “အိပ်ပျော်ခြင်းမှထား”).
ကျေးလက်ဒေသများတွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လိုင်စင်လိုအပ်မရစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်အားလုံးအရွယ်အစားနှင့်အမျိုးအစားပြည်တွင်းတိရိစ္ဆာန်များနေဆဲကာကွယ်ဆေးထိုးရပါမည်, ကြီးကြပ်သို့မဟုတ်ပါရှိသော. တိရစ္ဆာန်တစ်ဦးဝင်းထဲကရရှိသွားတဲ့နှင့်မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုပါက, တိရစ္ဆာန်ရဲ့ပိုင်ရှင်အပေါငျးတို့သပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပေးဆောင်ဖြင့်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်. ဤသည်မြင်းများနှင့်နွားကဲ့သို့အကြီးမားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူအထူးသဖြင့်အလေးအနက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ပင်သေးငယ်တိရိစ္ဆာန်များ drivers တွေကို swerve နှင့်လေယာဉ်ပျက်ကျစေနိုင်ပါတယ်. သငျသညျမောင်းနှင်နှင့်သင့်လမ်းကြောင်းကိုအတွက်တိရစ္ဆာန်ကြုံတွေ့ရနေတယ်ဆိုရင်, ဘီးဖြောင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်နှေးကွေး. သင်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်ထိမှန်လျှင်လမ်း၏ဘေးထွက်ဖို့ signal နဲ့ရွှေ့. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဤအကြောင်းကိုဆက်ဖတ်ရန်, အောက် “မွေးမြူရေးနှင့်လယ်ယာတိရိစ္ဆာန်များ။”
သင်းကွပ်ထားပါများအတွက်ဆပ်ဖို့အကောင်းဆုံးက, ရှေ့တက်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်လိုင်စင်. သူများသည်ကုန်ကျစရိတ်ပုံမှန်အားအကြောင်းကို run $400, တိရစ္ဆာန်၏အရွယ်အစားနှင့်လိင်ပေါ် မူတည်.. အဲဒီနောကျပျမ်းမျှအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဘို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၏ကုန်ကျစရိတ်အကြောင်း $600 တစ်နှစ်လျှင်. တန်ဖိုးနည်းတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဆေးခန်းများနှင့်တန်ဖိုးနည်းတိရိစ္ဆာန်မွေးစားမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းရာသီအလိုက်ဖြစ်ရပ်များအတွက်န်းကျင်စျေးဝယ်.
ကောင်းသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် protocol ကို
လူတိုင်းမတိရိစ္ဆာန်များ likes သို့မဟုတ်နေအိမ်များတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ကားများအတွက်စီးနင်းသူတို့ထဲက MIC မှခွင့်ပြု. အချို့လူများကသူတို့ကိုကြောက်လန့်သို့မဟုတ်မတည့်ဖြစ်ကြ. သူတို့ရောက်လာမတိုင်မီသူတို့မည်သည့်ပြဿနာမျှရှိသည်ဆိုပါကသင့်ရဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်များသင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိသည်နှင့်မေးဖို့သိပါစေ. ဧည့်သည်များလာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါအခြားအခန်းတွင်တိရိစ္ဆာန်များထားရန်ယဉ်ကျေးဒါဟာင်, နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသူစိမ်းမကြိုက်ပါလျှင်, ကနှစ်ထပ်ကွမ်းအကြံပြုရဲ့. လူအတော်များများဟာလုံခြုံရေးခွေးကိုစောင့်ရှောက်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုမရှိဘဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ယူဆပါတယ်ပါဘူး. သင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးခွေးကိုက်လျှင်, prompt ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရကြပြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖို့အလားအလာခြိမ်းခြောက်မှုဆန့်ကျင်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်ရဲကသတင်းပို့.
အများစုမှာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအိမ်သို့မဟုတ်ခြံအပြင်ဘက်ကိုအခြားသူများအနှောက်အယှက်မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်မှုအဘို့ထိုသူတို့ကာကွယ်တားဆီးဖို့လာသောအခါ leashed သို့မဟုတ်စဲလိမ့်ခွေးနှင့်ကြောင်နှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်.
သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကားတစ်စီးဝင်တိုက်ပြီဆိုရင်, နှောင့်အယှက်မွေးမြူရေး, unsupervised လှည့်လည်စဉ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကကိုက်, ရဲအများပြည်သူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သတ်မှရှိစေခြင်းငှါ. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပေးချေရန်အဘယ်သူမျှမရှိပါလျှင်တခါတရံတခုဒဏ်ရာရတိရစ္ဆာန်အချထား. သငျသညျဖြစ်ကောင်းဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်. တစ်ဦးကထွက်ပြေးသွားတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လည်းဝံပုလှေများသို့မဟုတ်အခြားလုယူရာဥစ္စာတိရစ္ဆာန်၏သားကောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်ပါကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဘယ်တော့မှသူတစ်ဦးကခေါ်ဆောင်သွား.
အဖော်တိရိစ္ဆာန်များစော်ကားခြင်းကိုမရမယ်, USA တွင်ထိခိုက်စေနိုင်သောသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရ, ထိုသို့တိရစ္ဆာန်နှင့်လိင်ရှိသည်ဖို့နီးပါးနေရာတိုင်းလေးနက်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်. များစွာသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် A ကောင်းဆုံးအုပ်ချုပ်မှုကိုသငျသညျကလေးတစ်ဦးမှမလုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးအဖော်တိရိစ္ဆာန်မှဘာမှလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်. နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်လျှင်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ပါသည်, ငတ်သော, ပူသို့မဟုတ်အအေး, သင့်ရဲ့အဖော်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်, လွန်း, ဒါကြောင့်ဘာပဲနှစျသိမျ့သငျသညျကိုယျအဘို့ပေးမယ့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှတိုးချဲ့ရပါမည်.
အတော်များများကကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်များကို USA တွင်ခြံနှင့်မွေးမြူရေးခြံပေါ်ကြီးပြင်းနေကြသည်, နွားတွေအပါအဝင်, မြင်းများ, သိုး, ဆိတ်များ, ဝက်, ကြက်, ယုန်, ငှက်ကုလားအုတ်, llamas, bison, ငါးနှင့်ဂဏန်းကွက်နှင့်. အများစုမှာတိရိစ္ဆာန်များအစားအစာထုတ်လုပ်ရန်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်အချို့ပညာရေးသို့မဟုတ်အပျော်အပါးအဘို့သိုထားကြသည်. အခြားသူများကတိရစ္ဆာန်သတ်ဖြတ်မစားနိုငျဘယ်မှာသရဏဂုံသို့မဟုတ်အမိုးအကာတှငျနထေိုငျ.
အများစုမှာအမေရိကန်တွေအသားစားများမှာ, ဒါပေမယ့်အထိ 10% ခိုင်မာတဲ့ဘာသာရေးရှိတယ်ဖြစ်စေလူဦးရေရဲ့, သာဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားသုံးခြင်းများအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်. အချို့လူများကငါးနှင့်ကြက်စားသော်လည်းအဘယ်သူမျှမပါလိမ့်မယ် “အနီေရာင်” အသား (နွားတွေကနေအမဲသားသို့မဟုတ်နွားငယ်သား, ဝက်ကနေဝက်သား, သိုးကနေဒါမှမဟုတ်သိုးသငယ်နှင့် mutton). အချို့ကမြို့-နေထိုင်သူကြက်ဥအဘို့ကြက်ကိုစောင့်ရှောက်, ဘယ်မှာခွင့်ပြုခဲ့.
များစွာသောဒုက္ခသည်များအကြားဆိတ်သငယ်ကိုအသားများအတွက် preference ကိုကြောင့်, ဆိတ်သငယ်ကိုခြံတစ်အရေအတွက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြ. မြင်းအသားမစားယေဘုယျအားဖြင့် USA တွင်အပေါ်သို့လန်ဒီသိတယ်ဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့မြင်းစားရန်အများဆုံးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်တရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်, ခှေး, ကွောငျ, သို့မဟုတ်အခြားတိရိစ္ဆာန်ယေဘုယျအားဖြင့်သို့မဟုတ်အစဉ်အလာတစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ်အဖော်အဖြစ်ထားရှိမည်. ရိုင်းထဲမှာဖမ်းမိခိုသို့မဟုတ်ရှဥ့်စားရန် OK ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အများပြည်သူပန်းခြံထိုသို့သောတိရစ္ဆာန်တွေကိုအမီလိုက်ဘယ်တော့မှမ.
ကျေးလက်ဒေသများတွင်, သငျသညျနွားတွေသို့မဟုတ်သိုးနွားများကိုခြေလျင်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များရှိလူများအားဖြင့်လမ်းများတစ်လျှောက်တွင်ပြောင်းရွှေ့ခံရမခံရမြင်စေခြင်းငှါ, ခွေးကသူတို့နှစ်ဖက်မှာအလုပ်လုပ်နှင့်အတူ. ဤအနွားများလမ်း၏ညာဘက် Give. ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တို့၏တိရစ်ဆာနျထိနျးကြောငျးသငျသညျတစျဆငျ့ကိုချီလွှဲရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်း, နှင့်တဖြည်းဖြည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်. သင့်ရဲ့ဦးချိုအသံဆူဆူညံညံမနေပါနဲ့ဒါမှမဟုတ်သင်တစ်ဦး Stampeders ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း. တစ်ဦးလူစုထဲမှာညပ်နေလျှင်, တက်လှိမ့်သင့်ရဲ့ပြတင်းပေါက်စောင့်ရှောက်, နှင့် sheepdog က၎င်း၏အလုပ်လုပ်ဖို့သင့်ကားကိုကျော်ကျော်ဝင်သောလျှင်သိပ်အံ့သြသွားဖြစ်ပါဘူး.
လယ်သမားများရှည်လျားသူတို့ရဲ့အစေ့များနှင့်မျိုးစေ့ထုတ်ကြွက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြောင်အပေါ်မှီခိုကြပါပြီ. မြွေလည်းကြွက်ကိုစားလို (အများဆုံးဇာတိမြွေကြောင်၏ဝါသနာမဟုတ်သော်လည်း), ဒါကြောင့်တစ်ဦးလယ်ယာကြောင်ကြွက်နှင့်မြွေနှစ်ဦးစလုံးကွယ်ပျောက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်. သေချာပင်လယ်ယာကြောင်စေရန်အကောင်းဆုံးက (သို့မဟုတ် “Mouser” သူတို့တစ်ခါတစ်ရံဟုခေါ်ကြသည်အဖြစ်) ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်သင်းကွပ်နေကြတယ်.
နှစ်ဦးစလုံးသည်မြင်းများနှင့်ခွေးအားကစားပွေးအလှားသှားရငျးနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်သာအနည်းငယ်ပြည်နယ်များရှိ. လူအတော်များများဟာဒီလူမျိုးအပေါ်အလောင်းအစားလူများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အန္တရာယ်များမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ထင်, ဒါကြောင့်သူတို့ကအစိုးရများကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်. ဘယ်နေရာမှာသည် dogfighting ဥပဒေရေးရာ, နှင့်ပြင်းထန်သောရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်များအန္တရာယ်မှာတိရစ္ဆာန်နဲ့လူတွေချပြီးဖမ်းမိသူတို့အဘို့တည်ရှိ. ကြက်-တိုက်ပွဲများ Louisiana နဲ့နယူးမက္ကဆီကို မှလွဲ. နေရာတိုင်းတရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့ကျယ်ပြန့်ပင်ရှိပံ့ပိုးပေးမထားပါ.
နှစ်ဆယ်ပြည်နယ်များထူးခြားဆန်းပြားတိရိစ္ဆာန်များတားမြစ်ကြောင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိ, ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတွားသွားအဖြစ်, ကျားစသည်တို့ကို. ထဲမှာ သူတို့ဥပဒေရေးရာများမှာနေရာများ, ဤ “တိုင်းတပါးမှယူဆောင်ခဲ့သော” ပါမစ်များနှင့်လိုင်စင်ရှိသည်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့ရတဲ့သို့မဟုတ်တည်ဆဲတိရိစ္ဆာန်များနှင့်သူတို့၏ပိုင်ရှင်များအတွက်ပြဿနာများဖန်တီးခြင်းမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဂရုတစိုက်ကြီးကြပ်သူဖြစ်ရမည်. မြန်မာစပါးအုံးမြွေများ, ဥပမာ, စုဆောင်းနေဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိသို့မဟုတ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်, ရပ်ကွက်အတွင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ဒေသခံတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စားရန်လူသိများပြီ.
တချို့ကစျေးဆိုင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရောင်း, အများအားဖြင့်ခွေး, ကြောင်, သေးငယ်တဲ့ကြွက်ငှက်, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သမျှ. တချို့ကအသစ်ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အခြားလမ်းကြောင်းသစ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနောက်ဆုံးပေါ်ချထားသော, စိတ်ကူးကျေနပ်မှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအခြေအနေများအတွက်မွေးမြူလျက်ရှိ. ဤအတောအတွင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဂရုစိုက်တတ်တဲ့နေအိမ်များမရှိခြင်းများအတွက်အမိုးအကာအတွက်ကိုချထားလျက်ရှိသည်. သင်တစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လိုလျှင်, သင်၏ဒေသခံတိရိစ္ဆာန်အမိုးအကာမှအစားတစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ကိုသွားစဉ်းစား.
သူတို့ရဲ့ကြောင်၏တကယ်ဂုဏ်ယူနေသောအမေရိကန်အတွက်အချို့လူများက, ခွေး, ထူးခြားဆန်းပြားသောငှက်များ, မြင်းသူတို့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်များကိုပြသမှန်မှန်ဖြည့်ဆည်း. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝါသနာမြှင့်တင်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်မဂ္ဂဇင်းများရှိ. ကျောင်းသားများလယ်ယာတိရိစ္ဆာန်များနှင့်မွေးမြူရေးဖေါ်ပြခြင်းတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါတယ်. လူအတော်များများဟာကိုခေါ်ပြိုင်ပွဲမှာမိမိတို့၏အမဲလိုက်, သိုး-ထိန်းကျောင်းရေးခွေး၏အခွက်တဆယ်ကိုသရုပ်ပြလို “စမ်းသပ်မှုတွေ။” သငျသညျသွားလျှင်, အခြားသူများတိရိစ္ဆာန်များန်းကျင်ပြုမူပုံကိုကြည့်ရှု, အများစုပိုင်ရှင်တွေသူစိမ်းသူတို့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်များကိုထိချင်ကြဘူးကြောင်းသတိထားမိ.